Ndị lanarịrị 'ofbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ' Laghachiri 'Abalị nke Onye Nwụrụ Anwụ nke Abụọ'
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ndị lanarịrị 'ofbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ' Laghachiri 'Abalị nke Onye Nwụrụ Anwụ nke Abụọ'
by Trey Hilburn III July 7, 2021 2,777 echiche
Chaị. Nke a dị oke egwu ịkọ. Amama na akụkọ nke ndị lanarịrịnụ si George Romero si Ofbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ adịghị biri dị nnọọ ma. Ụnyaahụ, ihe oyiyi na-adịghị teaser popped elu na anyị fọrọ nke nta efu anyị abụrụ ọnụ uche. O di ka anyi na enweta usoro na Ofbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ akpọ aha Abalị nke Ndụ Nwụrụ Anwụ II.
The teaser na-egosi ihe atọ ahụ jupụtara n'ọbara ma dị njikere maka agha nke ọ bụla na-ejide agha ọ maara. Nchịkọta nke usoro a na-ekwu na ndị lanarịrịnụ gaara enwe ụlọ na agwaetiti. Nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu nrọ banyere ime ya n'agwaetiti zombie. Na mgbakwunye, ọ dị ka ha emegharịala nke ọma na gburugburu ọhụụ ha na-atụle ezigbo uwe elu Hawaiian dị mma.
Lori Cardille, Terry Alexander, na Jarlath Conroy niile azụ maka nke a. Enweghị ọhụụ dị iche iche maka nke a.
Director, Marcus Slabine na-ewere dị ka onye edemede na onye nduzi na nke a ma nwee ezigbo obi ụtọ na mgbasa ozi ọha na eze iji nwee nsọpụrụ iduzi ndị atọ a.
Enwebeghị ụbọchị ntọhapụ gọọmentị maka Abalị nke Ndụ Nwụrụ Anwụ II, ma anyị ga-elepụ anya anyị maka mmepe ọ bụla ọzọ.
Kedụ ihe unu chere gbasara trailer? You nweelarị obi ụtọ ịhụ ụbọchị mbụ nke Ndị Nwụrụ Anwụ na-alaghachi na ihuenyo? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Halloween 1-5 na-abịa na diski 4K UHD site na mkpu! Lọ ọrụ. Gụkwuo ebe a.